Home Wararka Itoobiya iyo Kenya oo qarka u saaran in ay ku dagaalamaan gobolka...
Itoobiya iyo Kenya oo qarka u saaran in ay ku dagaalamaan gobolka Gedo
Dowladda Itoobiya ayaa keentay ciidan tiradiisa lagu qiyaasay ilaa 10 kun kuwaasoo loo keenay in ay si xoog ah ku qabsadaan gobolka Gedo iyo Gobolka Jubbada Dhexe kaddibna ay halkaa ka weeraraan magaalada Kismaayo si looga saaro maamulka Axmed Madoobe.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay aya MOL u xaqiijiyay in qorshahan lagu soo dhisay magaalada Asmara shir dhawaan ku dhex maray Madaxweynaha Soomaaliya, RW Itoobiya iyo Madaxweynaha Eriteriya kaasoo warsaxaafadeedkii ka soo baxay lagu sheegay in seddexda wadan ay iska kaashan doonaan arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta amniga seddexda dal.
RW Itoobiya oo maalmo ka hor la hadlay Baarlabaanka Itoobiya aya sheegay in la fashiliyay weeraro ay kooxda Shabab la damacsanaayeen in ay ka fuliyaan magaalada Addis Ababa, balse ay fashiliyeen ciidamanka amniga Itoobiya sida uu hadalka u dhigay.
RW Itoobiya Abiye Axmed ayaa ballan qaaday in kooxda Shabab ay ciidankiisa ugu tagi doonaan guryahooda halkaana ka ugaarsan doonaan. Dad badan ayaa arrinta u fasirtay in Abiye Axmed uu ogolaasho dadban ka helay Baarlabaankiisa balse ujeedka uu yahay in ciidanka Itoobiya ay si xoog ah ku qabsadaan magaalada Kismaayo. MW Farmaajo aya horay ugu ballan qaaday Itoobiya in uu siin doono afar dekedood oo ay ka mid tahay dekedda Kismaayo, halka Farmaajo uu rabo in laga saaro magaalada Kismaayo Axmed Madoobe iyo beesha Ogaadeen si ay beesha Mariixaan u hesho maamul goboleed.
Dowladda Soomaaliya u gudbisay ashatako ka dhan ah Kenya iyadoo ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha siyaasadda gobolka Gedo iyo Amniga gobolka, halka uu Farmaajo rabo in ay Itoobiyaan u qabtaan magaalada Kismaayo.
Labada dal ee Kenya iyo Itoobya aya qarka u saaran dagaal ku dhex mara Jubbooyinka. Ciidanka Kenya aya iyaga kusoo daabulaaya hub iyo ciidan tira badan magaalooyinka Mandheera iyo Wajeer waxayna u diyaar garoobyaan sidii ay uga hortagi lahaayeen ciidanka Itoobiya haddii ay gudaha u soo galaan gobolka Gedo.